Apple inogona kuburitsa maAirPod matsva kuWWDC munaJune | Ndinobva mac
Apple Inogona Kufumura Nyowani AirPods munaJune WWDC
Pedro Rodas | | apuro, Noticias
Isu tinotanga svondo nerunyerekupe rutsva kubva muruoko rweJPMorgan, kambani yemari isiri iyo yekutanga nguva iyo kutsunga kusimbisa zvinhu nezvekuburitswa kunotevera kweapuro yakarumwa, iyo pakupedzisira inopedzisira yave yechokwadi.
Mune ino kesi yave iri iPhone 7s, 7s Plus uye inofungidzirwa iPhone 8. Zvisinganetsi, runyerekupe runovimbisa zvimwe zvinhu nezve inogona kugadzirwa dhizaini yefoni idzi nyowani, chine chigadzirwa chatinokurukura mubhurogu yedu, iyo AirPods.
Vazhinji vashandisi avo nhasi vachiri kumirira yavo AirPods Uye ndezvekuti kunyangwe muApple Chitoro pachayo, stock yavo iri kuve musoro wevateveri. Zvishoma zvikamu zvinosvika vhiki rega rega iyo inobhururuka mune imwe maminetsi apo kumirira kweanenge vhiki nhanhatu isingadonhe paInternet.
Tiri kutaura nezve kekutanga kuti mune chakarumwa apuro chigadzirwa zvinonetsa kwazvo kudzikamisa sisitimu yayo, saka haisi nguva yekutanga kuti tinzwe uye tichifunga kuti shure kweizvi zvese pane chimwe chinhu. Kuti chimwe chinhu chinoratidzika kunge chine chekuita nerunyerekupe rwatinoda kutaura nezvarwo nhasi.
Icho chokwadi ndechekuti JPMorgan inosimbisa kuti matatu maPhones matsva ari kuzosvika, ma7s, 7s Plus uye pamusoro peiyo renji kana yakakosha edition, iPhone 8. Uye ndizvo chaizvo neiyo iPhone, iyo iPhone 8 iyo inonzi Apple inofungidzirwa. yaizosanganisira kekutanga munhoroondo nhevedzano AirPods pachinzvimbo cheEarPods. Ichi chingave chimwe chezvikonzero nei Apple isingakwanise kurarama nekugadzira AirPods uye ndezvekuti chingave chiri kugadzira zvidimbu kuti zvikwanise kuve nesheya inodiwa yekuisa mune ichave iri iPhone yavari kuzotengesa semadonati.
Saka kana uchironga kutenga iyo inotevera iPhone, ini ndanga ndakamirira zvishoma kuti ndione kana ichokwadi izvo zvinonzi iyo iPhone 8 ichave neyuniti yeakagadziridzwa AirPods seyakajairwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Apple Inogona Kufumura Nyowani AirPods munaJune WWDC
Musoro wenyaya unoti "Apple inogona kuburitsa maPodPod matsva" asizve nhau dzinotaura nezve inofungidzirwa kuti iPhone 8 inosanganisira AirPods, kusasanganisira iyo itsva AirPods modhi.
Ngatione kana tichijekesa nekuti musoro wenyaya nenhau zvakatosiyana.
Kana zvirizvo chete kuti zvichavasanganisira, saka ini handikanzure (kusvika June havasvike) sezvo ini ndisingatenge inofungidzirwa iyo iPhone 8, chimwe chinhu ndechekuti iri modhi nyowani, iyo kana ndikamirira (kunyange ndaizozvitenga ndoga)
Pindura kuna Diegus
Hi Diegus, patinotaura nezveAirPods nyowani, muchinyorwa chino tinotarisa pane runyerekupe rwekuti maAirPod matsva aya anosvika aine gore regumi re iPhone. Apple ingadai ichigadzirira ongororo yadzo yaizoburitswa pane iyo iPhone uye kwete zvisati zvaitika. Izvo isu zvatisingakwanise kukuvimbisa ndezvekuti iwo maAirPods achatengeswa pamwe nenhau idzi zvakasiyana kuti, munzira yangu yekufunga, vachazviita zvechokwadi. Hatigone kukuvimbisa 100% sezvo vari runyerekupe rwe network. Iwe unogona kushanyira mamwe akawanda mablogiki akasarudzika mumunda, kusanganisira maAmerican, kuti uone kuti kusefa kwakarurama. Kutenda nekuverenga! Ndine izvozvi uye ndinogona kukuudza kuti ndinopenga navo.
Alexander Wenchulaf akadaro
Saka avo vedu vatove navo, patinotenga Iphone 8 ivo vachatipa dhisikaundi, handiti? (sarcasm mode pa)
Pindura kuna Alejandro Wenchulaf
Manheru akanaka Alejandro, runyerekupe rwakateedzerwa pamambure nderwekuti Apple ichave ichisanganisira maAirPod mune iyo iPhone yegumi yegore. Iwo mahedhifoni achave ekudzokorora eazvino sezvo Apple ichizoda zvese zvinoperekedza icho chigadzirwa chitsva kuve chinyorwa uye runyerekupe runotaura kuti idzo nyowani maAirPods anosanganisira nhau dzisina kutariswa mumhando yazvino. Hatigone kuvimbisa zana muzana kuti izvi zvichazadzikiswa sezvo vari makuhwa. Isuwo hatigone kuziva kana shanduko idzi dzichaitwa paAirPods zvakasiyana kana kwete. Kutenda nekuverenga!
Pamberi peguhwa rakadai uye kana usiri kukurumidza ndaizomirira kuti ndione matanho anotorwa naApple. Kutenga chigadzirwa cheApple padyo nechiratidziro senge WWDC kune njodzi, kunyanya nekupisa kuri kuita nyika yeapuro neyegumi yegore iPhone.
Rumwe ruzivo nezve inogona kuzvimiririra mota yeApple
Iko hakuna huwandu hwepamutemo asi zvinofungidzirwa kuti Apple yakatengesa iyi yapfuura Q1 3.200.000 Apple Watch